သင့်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်တွင် Omegle ကိုအသုံးပြုရန် အက်ပ်မလိုအပ်ပါ။ဝဘ်ဆိုဒ်သည် မိုဘိုင်းတွင် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။
သင်စိတ်ဝင်စားသော သူစိမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံပါ။
Omegle(oh meg ull)သည် social distancing ကိုလေ့ကျင့်နေစဉ်တွင်ပင် သူငယ်ချင်းအသစ်များနှင့် တွေ့ဆုံရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။Omegle ကို သင်အသုံးပြုသောအခါ၊ တစ်ဦးချင်းစကားပြောရန် အခြားသူတစ်ဦးနှင့် ကျပန်းတွဲချိတ်ထားသည်။သင်နှစ်သက်ပါက၊ သင်သည် သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုများကို ထည့်နိုင်ပြီး တူညီသောစိတ်ဝင်စားမှုအချို့ကို ရွေးချယ်ထားသူတစ်ဦးနှင့် ကျပန်းတွဲပေးပါမည်။
သင့်အား ဘေးကင်းစေရန် ကူညီပေးရန်အတွက် သင်မည်သူဖြစ်သည်ကို သင်မည်သူဖြစ်ကြောင်း (မထောက်ခံပါ) နှင့် ချတ်ကို အချိန်မရွေး ရပ်တန့်ထားခြင်းမရှိပါက ချတ်များသည် အမည်မသိရှိနိုင်ပါသည်။Omegle ကိုအသုံးပြုရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများနှင့် ရှောင်ရန်များအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့် ကွန်မြူနတီလမ်းညွှန်ချက်များကို ကြည့်ပါ။Omegle ဗီဒီယိုချတ်ကို အကဲဖြတ်ထားသော်လည်း ထိန်းညှိမှုမှာ ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိပါ။Omegle ကိုအသုံးပြုနေစဉ် အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ အပြုအမူအတွက် တစ်ခုတည်းတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
Omegle ကိုအသုံးပြုရန် သင်သည် 18+ သို့မဟုတ် 13+ ဖြစ်ရပါမည်။နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် Omegle ၏ ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများကို ကြည့်ပါ။မိဘများကို ကူညီပေးနိုင်သည့် မိဘထိန်းချုပ်မှုအကာအကွယ်များကို စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်ပြီး https://www.connectsafely.org/controls/ အပြင် အခြားဆိုက်များတွင် သင်ပိုမိုသိရှိနိုင်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ Omegle မှထွက်ခွာပြီး သင်ရှာနေသည့်အရာဖြစ်ပြီး သင်သည် 18 နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ပါက ၎င်းအစား အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆိုက်သို့ ဝင်ကြည့်ပါ။
အတူတူလုပ်မယ်။သင် ဘယ်နေရာရောက်ရောက် လုံခြုံသောဆက်သွယ်ရေး
သင့်အား အဆက်အသွယ်မပြတ်စေရန်၊ ဆက်သွယ်ရန်နှင့် သင့်စိတ်ကူးများကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ ဝမ်းမြောက်စွာ ကူညီပေးပါသည်။သန်းပေါင်းများစွာသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစားလုပ်ငန်းငယ်များနှင့် သင်ကဲ့သို့ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ယုံကြည်အားထားမှုကို ဂုဏ်ယူပါသည်။
ခိုင်မာသောစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ပါ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားကောင်းစေပြီးပါဝင်သူ 1,000 အထိအတွက် HD ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကွန်ဖရင့်များကို လက်ခံကျင်းပပါ။
ပြောင်းလဲနေသော လုပ်သားလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရန် အစည်းအဝေးခန်းများကို HD ဗီဒီယိုနှင့် အသံ၊ ကြိုးမဲ့အကြောင်းအရာမျှဝေခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော မက်ဆေ့ချ်ဘုတ်များဖြင့် မျှတသောရုံးနှင့် အဝေးထိန်းအလုပ်အသွားအလာများကို ဖြည့်ဆည်းရန် အစည်းအဝေးခန်းများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပါ။
လုံခြုံသောခေါ်ဆိုမှုလမ်းကြောင်း၊ ခေါ်ဆိုမှုတန်းစီခြင်း၊ SMS၊ ခေါ်ဆိုမှုမှ အစည်းအဝေးနှင့် အခြားအရာများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတကာ cloud တယ်လီဖုန်းဖြေရှင်းချက်ဖြင့် သင့်အသံကို မြှင့်တင်လိုက်ပါ။
အိမ်တွင် ရုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူပါ - ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ မက်ဆေ့ချ်ဘုတ်များနှင့် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် စက်ပစ္စည်းရှိ မှတ်ချက်များ။
ချက်တင်ဖြေရှင်းချက်သည် အကောင့်နှင့်အတူ ပါဝင်ပြီး အလုပ်အသွားအလာများကို ရိုးရှင်းစေပြီး၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးကာ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရော ပြင်ပရှိ ဝန်ထမ်းများအကြား လုံခြုံသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အာမခံပါသည်။
အချိန်ဇယားဆွဲခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သင်ယူခြင်း၊ စာသားမှတ်တမ်း၊ CRM နှင့် အခြားအရာများအတွက် အက်ပ် 1,000 ကျော်နှင့် ပေါင်းစပ်မှုများဖြင့် သင်၏ Zoom အတွေ့အကြုံကို ပိုမိုရိုးရှင်းအောင် မြှင့်တင်ပါ။
Zoom သည် သင်၏ virtual event လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် Video Webinars နှင့် နောက်ဆုံးထွက် Zoom Events ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။လူတိုင်းနှစ်သက်မည့် virtual အတွေ့အကြုံများကို ဖန်တီးပါ။Zoom Events နှင့် Video Webinar များဖြင့် ယနေ့ စတင်လိုက်ပါ။
ကြွယ်ဝသောအက်ပ်များ၊ စိတ်ကြိုက်ပေါင်းစပ်မှုများနှင့် ရှိပြီးသား Zoom ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာများကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် ကြွယ်ဝသောအက်ပ်များကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ APIs၊ SDKs၊ webhooks နှင့် အခြားအရာများကို အသုံးပြုပါ။
လွယ်ကူစွာ ငွေရှာနိုင်ပြီး ပရိသတ်အသစ်များထံ အတိုင်းအတာဖြင့် ဆာဗာမှ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသည့် အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ။
အွန်လိုင်းတွင်လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်လွယ်ကူစေသည့်ကျပန်းဗီဒီယိုချတ်အက်ပ် ChatSpin မှကြိုဆိုပါသည်။ChatSpin သည် မျက်နှာဖုံးများ၊ လိင်နှင့် နိုင်ငံ စစ်ထုတ်မှုများ၊ သီးသန့်ချတ်နှင့် အခြားအရာများ အပါအဝင် ဗီဒီယိုချတ်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးပါသည်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ကျပန်းလူများနှင့် ချက်ချင်းစကားပြောပါ။သူငယ်ချင်းအသစ်များဖွဲ့ပါ၊ ချိန်းတွေ့ရန်၊ သင့်အရည်အချင်းများကို ပြသပါ၊ အကြံဉာဏ်တောင်းပါ၊ နိုင်ငံရေးစကားပြောပါ၊ သို့မဟုတ် သင်မဟုတ်ပါက သင်တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးသူနှင့် အေးအေးဆေးဆေး ဗီဒီယိုချတ်လုပ်ပါ။ဗီဒီယိုချတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပျော်ရွှင်စွာစတင်ရန် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး လွယ်ကူပါသည်။နောက်တစ်ကြိမ် ဘယ်သူနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာ မင်းဘယ်တော့မှ မသိပါဘူး။
သင်သည် လူသစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်လိုလျှင် ကျပန်းဗီဒီယိုချတ်သည် သွားရမည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ChatSpin သည် သင့်အား ထိုနေရာသို့ ခေါ်ဆောင်သွားမည့် ယာဉ်ဖြစ်သည်။သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာ—လူသစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခု သင်ရှာနေနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အက်ပ်ကို ချောမွေ့အောင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
ဒါဆို မင်းဘာကိုစောင့်နေတာလဲ။ကျပန်းလူများနှင့် ယခုချက်တင်ပါ။
အခမဲ့ Cam Chat ဝန်ဆောင်မှုများ
သူစိမ်းများနှင့် ကျပန်းစကားပြောခြင်းကို လွယ်ကူစေရန်အတွက် မစ်ရှင်တစ်ခုဖြင့် Chatspin ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။
နပေါဦး။ဒါ ဇာတ်လမ်း အပြည့်အစုံတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ပိုမိုစည်းလုံးသောကမ္ဘာ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပတွင်ရော အခြားသူများနှင့် စစ်မှန်သော ချိတ်ဆက်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည့် ကမ္ဘာကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗီဒီယိုအက်ပ်ကို ဖန်တီးရန် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ကို တွန်းအားပေးစေသည်။ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုစီသည် ကမ္ဘာကြီးကို ပိုမိုနီးကပ်လာစေပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား နားထောင်ရန်နားများကို ရှာဖွေရန် ကူညီပေးကာ အချင်းချင်း အကြံဥာဏ်များရှာဖွေရန် နေရာပေးသည်။
Chatspin သည် သင့်အတွက် သင့်လျော်သော ကျပန်းလူများနှင့် ချတ်လုပ်ရန် လွယ်ကူစေသည်။မှန်ကန်တဲ့လူတွေနဲ့ မတွေ့ဆုံဘဲ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။Chatspin ၏ ကျပန်းဗီဒီယိုချတ်အက်ပ်သည် အနီးအဝေးတွင် အခြားသူများနှင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ချိတ်ဆက်ခံစားနိုင်ရန် သင့်ပေါ်တယ်ဖြစ်သည်။
Face to Face၊ Tinder ၏ ရွေးချယ်မှုတွင် ပါဝင်သည့် ဗီဒီယိုချတ်ဝန်ဆောင်မှုကို ယခုအခါ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Tinder သည် လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ချိန်းတွေ့မှုများနှင့် ကိုက်ညီမှုများကို ရှာဖွေရန်နှင့် ၎င်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် လူများအတွက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ချိန်းတွေ့သည့်အက်ပ်ဖြစ်ပြီး၊ အက်ပ်အတွင်းလူများသုံးစွဲသည့်အချိန်ကို တိုးမြှင့်ရန်နှင့် ၎င်းတို့အတွင်း၌ရှိသော ဆက်သွယ်မှုများကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ယနေ့တွင် အခြားအင်္ဂါရပ်တစ်ခုကို တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။
Face to Face ၊ Tinder သည် ယခုနှစ်အစောပိုင်းက မိတ်ဆက်ခဲ့သည့် သီးသန့်အင်္ဂါရပ်ဖြစ်သည့် ဗွီဒီယိုချတ်လုပ်ခြင်းမရှိဘဲ သုံးစွဲသူများ အချင်းချင်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖလှယ်ခြင်းမရှိဘဲ ကင်မရာကို မျက်နှာမူသည့်အခါမှသာ ကမ္ဘာအနှံ့ ချဲ့ထွင်လာနေပြီဖြစ်ပြီး အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လူတော်တော်များများ လူချင်းမဆုံဖြစ်တဲ့အချိန်။
Tinder သည် ချိန်းတွေ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ၏ ကြောက်စရာကောင်းသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများကို ကောင်းစွာသိရှိထားပြီး ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ဗီဒီယိုအဖွဲ့မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းကိုတည်ဆောက်သော ၎င်း၏ယုံကြည်မှုနှင့်ဘေးကင်းရေးအဖွဲ့အား အမွှမ်းတင်ထားသည်။
Tinder မှ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထုတ်ကုန်အကြီးအကဲ Rory Kozoll က "ကျွန်ုပ်တို့၏ Face to Face အင်္ဂါရပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များထံမှ အပြုသဘောဆောင်သော တုံ့ပြန်ချက်ရရှိပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့အသိုက်အဝန်းထံ ဖြန့်ကျက်ရောက်ရှိလာသည်ကို မျှဝေလိုက်ရသည့်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည်။"၎င်းသည် ဓာတ်ပုံအတည်ပြုခြင်း၊ ဘေးကင်းရေးဌာနနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရိုင်းစိုင်းသော မက်ဆေ့ချ်ရှာဖွေခြင်းနည်းပညာကဲ့သို့ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ချိန်းတွေ့ခြင်းခရီးတစ်လျှောက်တွင် အဖွဲ့ဝင်ဘေးကင်းရေးကို အာရုံစိုက်တည်ဆောက်ထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးပွားလာသော အင်္ဂါရပ်များစာရင်းသို့ ပေါင်းထည့်ပါသည်။”
ချိန်းတွေ့ခြင်းအက်ပ်များသည် အစိုးရစည်းမျဉ်းများကြောင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများ၏ အကြံပြုချက်များကြောင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် နှစ်ခုလုံးတွင်- လူမှုရေးအရ ခပ်ခွာခွာနေထိုင်ခြင်းနှင့် သေးငယ်သော၊ အများသိကြပြီး ပုံမှန်ပူဖောင်းများဖြင့် စုဝေးနေသည့်ကာလတွင် ချိန်းတွေ့ခြင်းအက်ပ်များသည် ထူးဆန်းသောအမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ် ထင်ရနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ ဒီနေရာမှာ အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိပုံရတယ်- သူတို့က လူတွေအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ပြီး တွေ့ဆုံဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်၊ အရက်ဆိုင်တွေနဲ့ တခြားရိုးရာတွေ့ဆုံပွဲတွေ ပိတ်တဲ့အချိန် ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံး သူတို့ရဲ့ ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ရှာဖွေဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ၊ သင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သမျှ အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့် လူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လူချင်းတွေ့မှု နည်းပါးပါလိမ့်မယ်။
ကိစ္စတစ်ခုအနေဖြင့် AppAnnie မှကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအရ Tinder သည် ယခုနှစ်အတွင်း လူနေမှုပုံစံအက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း၏ ထိပ်တန်းအဆင့်တွင် ဆက်လက်ရှိနေသည် (၎င်းသည် US တွင် လက်ရှိ iOS တွင် နံပါတ်သုံးနေရာတွင် ရှိနေသည်)။
ဗီဒီယိုချက်တင် လုပ်ဆောင်ချက်သည် အပြင်တွင် မည်သူနှင့် ကိုက်ညီနိုင်သည်ကို သိရန်သာမက ထိုလူများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်အတွက်သာ အက်ပ်ကို အသုံးပြုခြင်း၏ စိတ်ကူးကို ပေါ်လွင်စေပါသည်။
ဤနေရာတွင် နောက်ထပ် အပေါင်းလက္ခဏာတစ်ခုမှာ ၎င်းသည် ဘားတစ်ခုတွင်ရှိသကဲ့သို့ သင့်ထံချဉ်းကပ်လာသော မလိုလားအပ်သောသူများ၏ အခမဲ့-အားလုံးအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော spamfest မဟုတ်ပါ။
နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စလုံးသည် အင်္ဂါရပ်ကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း Tinder မှ မှတ်ချက်ပေးထားပြီး ချတ်တစ်ခုမစတင်မီ အက်ပ်၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတွင် ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပေးထားသည်။
ထို့နောက်တွင်ပင် သင်သည် ပုံမှန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကဲ့သို့ ၎င်းတို့ဝင်လာသည့်အခါ ဗီဒီယိုချတ်များကို လျစ်လျူရှုရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင့်အား မသင့်လျော်သောအရာများပြောပြီး သင့်ကိုအလွန်အကျွံခေါ်ဆိုနေပြီး သင်သည် ကြောက်စရာကောင်းသောလူများဖြစ်လာပါက၊ သင်လုံးဝ၏အင်္ဂါရပ်ကိုမလှည့်ချင်ပါက၊ ၎င်းတို့၏ပရိုဖိုင်သို့ရွှေ့ပြီး "အစီရင်ခံစာ" ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့် လူများကို သတင်းပို့နိုင်သည်။
Tinder သည် အက်ပ်တွင် လူများ အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်သည့် နည်းလမ်းများကို တိုးချဲ့ရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာအောင် ကစားခဲ့ပြီး ဗီဒီယိုသည် လက်ရှိ အက်ပ်များတွင် ရေပန်းအစားဆုံးနှင့် ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး ကြားခံများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရလဒ်တွေ ရောထွေးနေခဲ့တယ်။Tinder Loops သည် သင့်ကိုယ်သင် ထုတ်ဖော်ပြသသည့် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး 2022 ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ခဲ့ပြီး အားကောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။၎င်း၏ Swipe Night apocalyptic interactive video in-app ရှိုးကဲ့သို့ အခြားသော ကြိုးပမ်းမှုများကို Covid-19 ကြောင့် မတ်လတွင် ခေတ္တရပ်နားထားသော်လည်း မကြာသေးမီက ၎င်းသည် အခြားစျေးကွက်များတွင် ပြန်လည်ရှင်သန်လာပုံရသည်။
Callpy သည်သင့်ဆိုဒ်သို့ လာရောက်လည်ပတ်သူများနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ခြေကို သိရှိနားလည်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ရောင်းအားတိုးတက်မှု၊ ဆိုက်၏ပြောင်းလဲခြင်းကိုသိသာထင်ရှားစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် နှင့်လာရောက်လည်ပတ်သူများထံမှ ထပ်ခါတလဲလဲလည်ပတ်မှုများကို တိုးပွားစေမည်ဖြစ်သည်။
အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု 19 ရက်
Browser တွင် တိုင်ပင်ပါ။
19 ရက် ဒီမိုကို ရယူပါ။
ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်များမှ ဧည့်သည်အဆက်အသွယ်များကို ရယူပါ ။
ဝဘ်ဆိုဒ် စာမျက်နှာများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။
အသုံးပြုသူထွက်သွားသောဒေတာကို CRM သို့ အပ်လုဒ်တင်နိုင်ပြီး ဖိုင်တစ်ခုအဖြစ်လည်း အပ် လုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
အတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးရှိနေသည်ဖြစ်စေ ဧည့်သည်ဒေတာစုဆောင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။အဆက်အသွယ်များသည် သင်၏ပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲ ပျံသန်းခြင်း CRM (AMO သို့မဟုတ် Megaplan) သို့ ရောက်ရှိပါမည်။
လူကြိုက်များသော crm နှင့်ပေါင်းစပ်
ဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် လုပ်ဆောင်စရာများကို CRM သို့ ထည့်ပါ။
လုပ်ဆောင်ချက်အကန့်အသတ်မရှိ လာရောက်ကြည့်ရှုသူများနှင့် အခမဲ့စကားပြောပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဘက်များထက် ပိုကောင်းပါသည်။
အခမဲ့လုပ်ဆောင်ချက် ၂၇ ခု
အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းခွင်အတွက် တစ်လလျှင် 215 ₽ မှ
နောက်ထပ် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း ၃ ခု
ချတ်၊ အသံ၊ ဗီဒီယို၊ လှုပ်ရှားမှု စောင့်ကြည့်ခြင်း။
ထပ်လောင်းခြင်း၊ အသံ/ဗီဒီယို ဆက်သွယ်မှုကို ထိန်းချုပ်ပါ။
19 ရက်ရောင်းအားတိုး, 20 အလုပ်အကိုင်များ
လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ကိရိယာများ၏ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုနှင့် ရိုးရှင်းမှု
ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများကို ပြုလုပ်ပါ။
စာမျက်နှာများမှတဆင့် ဧည့်သည်ကို ဘာသာပြန် ပါ၊အကြောင်းအရာကို ပြသပါ။
ဧည့်သည်များ၏ လှုပ်ရှားမှုကိုအချိန် နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့် ပါ။
လည်ပတ်သူ စာမျက်နှာရှိ အရာများကို အသားပေးဖော်ပြပြီး မှတ်သား ထားပါ။
Callpy သည် ပျင်းရိသောဧည့်သည်အား အလိုအလျောက် အကူအညီပေးလိမ့်မည် ။
ကော်ပိုရိတ်ဝိသေသလက္ခဏာ ဒြပ်စင်များဖြင့်ဝစ်ဂျက် စတိုင်ကို နက်ရှိုင်းစွာ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း။
သုံးစွဲသူအဆက်အသွယ်များကို CRM တွင်အလိုအလျောက်သိမ်းဆည်း ပါ။
Callpy ဖောင်မှတဆင့်ဆိုက်လာရောက်သူများ၏အဆက်အသွယ်များ စုစည်းမှု
အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့များ ဖန်တီး၍ဧည့်သည်စီးဆင်းမှု များကိုဖြန့်ဝေ ပါ။
ချိန်းတွေ့ခြင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးအတွက် ရေပန်းအစားဆုံး ရုရှားဗီဒီယိုချတ်တွင် ပါဝင်ပါ သို့မဟုတ် ကွန်ရက်အတွင်းရှိ သူငယ်ချင်းအသစ်များနှင့် သူငယ်ချင်းဟောင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် အချိန်ကောင်းတစ်ခုရယူပါ။ World Wide Web သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လူကြိုက်များလာကာ ဗီဒီယိုချတ်နှင့် အခြားသော ဝဘ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အကူအညီဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဆက်သွယ်ရန် နည်းလမ်းအသစ်များနှင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့် နည်းလမ်းများကို ပေးဆောင်လျက်ရှိပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသူများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်သာမက လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ချိန်းတွေ့ခြင်းအတွက် မူရင်းဗီဒီယိုချက်တင်သည် ဝဘ်ကင်မရာ chatroulette-worldwide.com အွန်လိုင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဆက်သွယ်မှု။ စာရင်းဇယားများအရ လူငယ်များ (အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား) များသည် အခန်းမှမထွက်ဘဲ ဗီဒီယိုချတ်တွင် ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏တစ်ဝက်ကို ရှာဖွေကြသည်။ အရင်းအမြစ်၏အောင်မြင်မှု။
အောင်မြင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက် chat-ruletka.net သည် ရိုးရှင်းသော web cam နှစ်ဖက်ကြောင့် ဆက်သွယ်မှုမှလွဲ၍ ဒုတိယပိုင်းကိုစူးစမ်းရန် အရေးကြီးသောကြောင့် အချင်းချင်း အမြင်အာရုံအကဲဖြတ်နိုင်ကြသည်။ ပုလင်းလှည့်ပတ်ကစားနည်း၊ မည်သည့်နေရာမှ၊ ချတ်ကစားတဲ့နာမည်အားလုံးကို ကျပန်းကျပန်းဖြင့် ရှာဖွေနိုင်သောကြောင့် ချတ်သည် လူကြိုက်များမှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ အကြံဥာဏ်များနှင့် လှည့်ကွက်များ လက်တွေ့ဘဝတွင် သူငယ်ချင်းအသစ်များနှင့် ဗီဒီယိုချတ်တွေ့ဆုံသည့်အခါတွင် အင်တာဗျူးဖြေဆိုသူတိုင်းသည် ဗီဒီယိုချတ်တွင် စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်များအစား တကယ့်လူများကို မြင်လိုသောကြောင့် အကြံဥာဏ်များနှင့် လှည့်ကွက်များကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ထားပါ။ ဆက်သွယ်ပါ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ သူငယ်ချင်းဟောင်းများကိုရှာဖွေပါ၊ သာယာသောလေထုတွင်လူနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်ကြိုးစားပါ၊ ဆဲဆိုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ၊ စကားဝိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးပျော်စရာကောင်းအောင်ထားပါ - အောင်မြင်သောချိန်းတွေ့ခြင်း၏သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ချီးမွမ်းပါ၊ လက်ဆောင်များပေးပါ။ လက်တွေ့ဘဝတွင်၊လက်ဆောင်များသည် ခေါ်ဆိုသူအား အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် အပေါင်းအဖော်များနှင့် မိတ်ဆွေများကြားတွင် သင့်အပေါ်တွင် ထင်ရှားပေါ်လွင်စေကြောင်း ခေါ်ဆိုသူကို နားလည်စေရန် လက်ဆောင်များပေးအပ်သည်။ စည်းမျဉ်းများ ရုရှားဗီဒီယိုချတ် coomeet memeet သည် အပြုသဘောဆောင်သောပုံစံဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုချတ်ကို ပေးဆောင်သည်။ ချတ်စကားပြောဆိုမှုများသည် အများအားဖြင့် ရုရှားစကားပြောအသုံးပြုသူများဖြစ်သည်။
ကျင့်ဝတ်အရ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မပြုရန် တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားသည်။18 နှစ်အထိ အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ။အကြပ်ကိုင်ပြီး သီးသန့်အစိတ်အပိုင်းများကို ပြသရန် တားမြစ်ထားသည်။လုံခြုံရေးအတွက် လုံခြုံရေး ဗီဒီယိုချတ်အတွက် မရိုးသားသောလူအရေအတွက်ကို လျှော့ချရန် ခက်ခဲမည်မဟုတ်သော်လည်း ရိုးရှင်းသောမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုသည် ချတ်ကို စစ်ထုတ်ပြီး ကျူးကျော်သူများကို ပိတ်ဆို့စေမည်ဖြစ်သည်။
2022 ရှိ omegle ကဲ့သို့ အကောင်းဆုံး ချတ်ဆိုက်များ - အခမဲ့ ဗီဒီယိုချတ်အတွက် ချတ်ရွေးချယ်စရာများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသောအလုပ်များစွာအတွက် အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုသော်လည်း အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ လူမှုရေးဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးအတွက် လိုအပ်မှုသည် သာမန်လူအများစုအတွက် နှစ်သိမ့်မှုနှင့် ကျေနပ်မှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးသည့် လူ့အခြေနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် Facebook သည် အလွန်ရေပန်းစားသည်။
ဒါပေမယ့် လူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့ တခြားဆိုဒ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။၎င်းတို့ထဲမှ အများအပြားကို ဖိုရမ်များ သို့မဟုတ် မက်ဆေ့ချ်ဘုတ်များဟု ခေါ်သည်သို့သော်၊ သင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်နိုင်သလောက် ကိုယ်ပိုင်စကားပြောဆိုမှုများနှင့် နီးစပ်သည့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီမျှဝေမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည့် ဆိုက်များစွာရှိသည်။
ရေပန်းအစားဆုံး ဝဘ်ဆိုက်များထဲမှ တစ်ခုသည် Omegle ဟုခေါ်သည်၊ အဖွဲ့ဝင်များသည် ဗီဒီယို၊ အသံ သို့မဟုတ် စာသားသက်သက်ဖြင့် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်ကြသည်။ကြုံရာကျပန်းလူများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ပြီးပြည့်စုံသော သူစိမ်းတစ်ဦးနှင့် စကားပြောဆိုရန် နေရာကောင်းဖြစ်သည်။သို့သော် အဓိကဆိုက်အများစုကဲ့သို့ Omegle သည် လူဦးရေအလွန်များပြားလာသည်။
အောက်တွင် သူငယ်ချင်းအသစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် Omegle ကဲ့သို့သော တိုက်ရိုက်စကားပြောခန်းအချို့ကို သင်တွေ့ရပါမည်။
1. Chatliv- Chatliv- ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာမှ သူစိမ်းတစ်ဦးနှင့် ဝဘ်ကင်မရာ ချတ်လုပ်ရန် အမြန်ဆန်ဆုံးနှင့် အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်း။သင်လုပ်ရမှာက သင်နဲ့တွေ့လိုတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်ကို ဝန်ဆောင်မှုက အသင့်တော်ဆုံး သူစိမ်းကို ချက်ချင်းရွေးချယ်ပေးမယ့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျားမကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
Chatliv သည် အကောင်းဆုံး ဗီဒီယိုချတ်ဆိုက်ဖြစ်ပြီး လူကြိုက်အများဆုံး ဗီဒီယိုချတ်ဆိုက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။အွန်လိုင်းစကားပြောခန်းများတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ထောင်နှင့်ချီသော စကားများ အမြဲအွန်လိုင်းပေါ်နေပါသည်။
2. CooMeet-Coomeet သည် ရုရှားဘာသာစကား ဗီဒီယိုချတ်နှင့် ချိန်းတွေ့သည့်ဆိုက် (ကစားတဲ့) တစ်ခုဖြစ်သည်။chatroulette နှင့် omegle အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခု၊ coomeet တွင် သင်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကျပန်းသူစိမ်းများနှင့် ချိန်းတွေ့သည့်ဗီဒီယိုကို စတင်နိုင်သည်။Coomeet သည် ကစားတဲ့ နိယာမကို လုပ်ဆောင်နေသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်ဘယ်သူနှင့် စကားပြောမည်ကို သင်ဘယ်တော့မှ မသိနိုင်ပါ။သင်ငြီးငွေ့လာလျှင် ဤချတ်အမျိုးအစားများသည် သင့်အား စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချို့ကို ယူဆောင်လာနိုင်သည်။
Coomeet ၏အင်္ဂါရပ်များ-1. သူစိမ်းတစ်ဦးနှင့် အမြဲချိတ်ဆက်ပါ2. အခမဲ့ ဗီဒီယိုချတ်3. သင့်သူငယ်ချင်းစာရင်းတွင် ထူးဆန်းသောလူများကို ပေါင်းထည့်ပါ4. သင်ချစ်သော သူစိမ်းနှင့် အဆက်အသွယ်မပြတ်ပါ5. သင့်ချစ်ရသူထံသို့ လက်ဆောင်များနှင့် နှင်းဆီတစ်ပွင့် ပေးပို့ပါ 6. ရှာဖွေပါ အကောင်းဆုံးအဖော်
3. TinyChat-ယနေ့တွင်၊ TinyChat သည် အင်တာနက်ပေါ်တွင် အကြီးဆုံး အသံနှင့် ဗီဒီယို ချတ်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူများသည် တစ်နေ့လျှင် မိနစ်5မီလီယံ လေ၀င်လေထွက်အချိန်ကို ဖန်တီးနိုင်သည်ဟု ကြွားဝါသည်။အဲဒီမှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ chat တွေကို တွေ့လိမ့်မယ်၊ တချို့က သင့်ဒေသကလူတွေက အစပြုခဲ့တာတောင်မှ သင်လိုချင်တဲ့ theme ကို ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်၊ သင်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
TinyChat သည် အခန်းတစ်ခန်းလျှင် ဗီဒီယိုကြည့်ရှုမှု 12 ခုအထိ ခွင့်ပြုထားပြီး သုံးစွဲသူများသည် ဝန်ဆောင်မှုပေါ်ရှိရှိုးများမှ တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည့် API ကို အသုံးပြုကာ ၎င်းနှင့်မထိုက်တန်ပါ။မိုက်ခရိုဖုန်း၊ ဗီဒီယို သို့မဟုတ် ချက်ခြင်းစာတိုပေးပို့ခြင်းမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ရန် လူများစုဝေးကြသည်။
4. Omegle Webcam-Omegle Webcam သည် ရေပန်းအစားဆုံး ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့် စကားပြောခြင်း ဝဘ်ကင်မရာဖြစ်သည်။ စာရင်းသွင်းအသုံးပြုသူ 20,000,000 ကျော်။ အခမဲ့ Chat Roulette ချတ်များ။ omegle ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များ။Omegle Webcam သည် Omegle ကျပန်းဗီဒီယိုချတ်အတွက် အခမဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဝဘ်ကင်မရာကိုအသုံးပြု၍ သူစိမ်းများနှင့် အမည်မသိစကားပြောကာ လူသစ်များကိုချက်ချင်းတွေ့ဆုံပါ။ ကျပန်းအသုံးပြုသူများနှင့် ဗီဒီယိုချတ်လုပ်ပါ၊ သူငယ်ချင်းအသစ်များလုပ်ပါ။ Omegle ချစ်သူများနှင့် လူမှုဆက်ဆံရေးရှိပါစေ။Omegle.webcam သည် chatroulette site အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
5. Bazoocam-Bazoocam သည် သန့်ရှင်းနေစေရန် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး web chat site တစ်ခုဖြစ်သည်။ဖော်ပြထားသော အခြားဆိုက်အချို့ကဲ့သို့ပင် သင်သည် အခြားသူတစ်ဦး၏နေရာသို့ မတော်တဆရောက်သွားသည်။သင်မြင်သောအရာကို မကြိုက်ပါက၊ သင်သည် "skip" ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး အခြားသူတစ်ဦးထံ ဆက်သွားရန်။
Bazoocam သည် ရေခဲခွဲသူများအဖြစ် သင်ပါဝင်နိုင်သည့် ဂိမ်းအများအပြားကို ပေးသည် သို့မဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းပြောရန် ငြီးငွေ့လာပါက၊သင်ငြီးငွေ့နေတယ်ဆိုရင် သူတို့က သာမာန်ထက် တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းပေမယ့် သင့်အဝတ်အစားတွေကို ၀တ်ထားဖို့ သတိပေးပါ။ဝတ်စုံကို ၀တ်ဆင်ကြည့်ပါ သို့မဟုတ် သင်နှစ်သက်သော သီချင်းကို ဖွင့်ကြည့်ပါ။ဟင့်အင်း၊ ဂစ်တာ ဒါမှမဟုတ် kazoo တီးရင် မင်းနဲ့ စကားပြောဖို့ လူတွေအများကြီး တွေ့လိမ့်မယ်။
6. FaceFlow-FaceFlow - ဤလူများသည် တစ်ကြိမ်လျှင် လူသုံးဦးအထိ ထားရှိနိုင်သော ဗီဒီယိုချတ်များ ပါရှိစေခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများကို လူမှုမီဒီယာကို နောက်တစ်ဆင့်သို့ တက်လှမ်းစေသည်။FaceFlow သည် "သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဆာတွင် သူငယ်ချင်းများနှင့် အခမဲ့ ဗီဒီယိုချတ်နှင့် ဗီဒီယိုအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း" ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း သင်သူစိမ်းများနှင့်လည်း စကားပြောနိုင်ပါသည်။ယခုအခါ အသုံးပြုသူများသည် ရှာဖွေနိုင်သော ပရိုဖိုင်ကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ နှစ်သက်ရာ ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများကို YouTube တွင် မျှဝေနိုင်ပါသည်။
အခြားသော ဝဘ်ချက်တင် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုမျှသာ ဖြစ်သည့်အပြင်၊ ဤဆိုက်သည် Skype ပေးဆောင်ရမည့် ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပိုမိုကိုက်ညီပါသည်။၎င်းသည် စာသားနှင့် တစ်ကြိမ်တည်း ဗီဒီယိုချတ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။အရာတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင် FaceFlow က တော်တော်ခက်ခဲတဲ့ Flappy လို့ ခေါ်တဲ့ multiplayer ဂိမ်းတစ်ခုကို ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
7. ChatRandom-Chatrandom တွင် အချို့သော ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးမားမားရှိသည်၊ တစ်ခုဖြစ်သည့် Facebook၊ Twitter သို့မဟုတ် YouTube တို့ကဲ့သို့ နာမည်တူဖြစ်လာရန်ဖြစ်သည်။၎င်းသည် အသုံးပြုသူတစ်ဦးအား အခြားကျပန်းအသုံးပြုသူနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည့် အခြားဝဘ်ကင်မရာဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ဝဘ်ဆိုဒ်သည် စည်းမျဉ်းများကို မကြာခဏပြောင်းသောကြောင့် ၎င်းသည် Chatroulette အတွက် အစားထိုးတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။
ဤပန်းတိုင်ကိုရောက်ရန်၊ ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူများကို စုစည်းပြီး နိုင်ငံနှင့်ဘာသာစကားအသစ်များကို အဆက်မပြတ်ထည့်သွင်းပါသည်။အခြားသူတစ်ဦးနှင့်၊ အဖွဲ့တစ်ခုနှင့် သို့မဟုတ် မိန်းကလေးများနှင့် ကျပန်းဆက်သွယ်ရန် သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့်၊ လိင်တူချစ်သူများနှင့်အတူ သို့မဟုတ် သီးခြားဘာသာစကားတစ်ခုဖြင့် ပြောဆိုခြင်းအတွက် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။သုံးစွဲသူများ၏ မျှော်လင့်ချက်များကို ပြည့်မီစေရန် ၎င်းတို့သည် နောက်ထပ် ဝဘ်ကင်မရာနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများကို ပေါင်းထည့်ပါသည်။
8. Chatroulette-Chatroulette သည် သုံးစွဲသူများအား ကျပန်းသူစိမ်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် ထူးခြားသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုပါရှိသော ဝဘ်ကင်မရာအခြေခံ ချတ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ရုရှားကစားတဲ့ကစားနည်းအတိုင်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်၊ သေနတ်နဲ့ထိုးမယ့်အစား ရိုက်ထားတဲ့မက်ဆေ့ချ်တွေနဲ့/သို့မဟုတ် ဝဘ်ကင်မရာကနေတစ်ဆင့် နှုတ်နဲ့ပြောပြီး သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က မကြိုက်တဲ့အရာကို ပြောပါ သို့မဟုတ် လုပ်ပါက ချတ်မှ ထွက်သွားပါ ("သတ်") စကားဝိုင်း)။
၎င်းကို ၎င်း၏အိပ်ခန်းမှ မိဘအိမ်သို့ ယူဆောင်လာခဲ့သည့် အသက် 17 နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦးမှ 2022 ခုနှစ်တွင် ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ကြော်ငြာများမရှိသော်လည်း၊ ဤဆိုဒ်သည် ပါးစပ်ဖြင့် အရွယ်အစားကြီးမားလာသည်။နှစ်အတန်ကြာ စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ အမှားအယွင်းတွေ လုပ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ မသင့်လျော်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ထိရောက်စွာ စစ်ထုတ်နိုင်တဲ့ အဆင့်ကို ရောက်နေပါပြီ။
အသုံးပြုသူများသည် ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများကို မှတ်ပုံတင်ပြီး သဘောတူရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ချိုးဖောက်သူများကို ဆိုက်ကြီးကြပ်သူများမှ စစ်ထုတ်မည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူအများစုသည် အသက် 30 နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများ ပိုမိုများပြားသည်။ အနည်းဆုံး R အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
အွန်လိုင်းတွင် သူစိမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းအတွက် စည်းမျဉ်းများ1. နောက်မှ တိုင်ကြားနိုင်သော မည်သည့်အရာကိုမျှ မလုပ်ပါနှင့်။ သင့်ချတ်၊ စာသား၊ အသံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုကို အလွယ်တကူ မှတ်တမ်းတင်ပြီး သင့်အား အသုံးပြုနိုင်သည်။2. သင်သည် အနိုင်ကျင့်ခံရပါက ၎င်းကို သတင်းပို့ပြီး အသုံးပြုသူကို အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းပါ။တစ်စုံတစ်ယောက်အနိုင်ကျင့်တာကိုတွေ့ရင် ဒီလိုလုပ်ပါ။3. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မည်သူနှင့်မျှ မမျှဝေပါနှင့်။4. ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လိမ်လည်သူများသည် သင့်အချက်အလက်များအတွက် ဖြားယောင်းပေးလိမ့်မည်။5. မိသားစုဓာတ်ပုံများ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူအား ခြေရာခံရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကဲ့သို့သော ဗီဒီယိုချတ်ဘောင်တွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတစ်စုံတစ်ရာကို ချန်မထားပါနှင့်။6. ဤဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသည့်အခါ သင့်မိသားစုအား မည်ကဲ့သို့ ဘေးကင်းစေရန် သင်ပေးပါ။၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည် ပြင်းထန်စွာ ထိန်းညှိထားသော်လည်း၊ စမတ်ကျသော သားရဲအချို့ ရှိနေသေးသည်။7. ပျော်ရွှင်ပါစေ... ဒါပါပဲ ။